Tsy maintsy mitambatra sy miara-mirona ve ? | NewsMada
Tsy maintsy mitambatra sy miara-mirona ve ?
Sarotra ny fandidiana. Indrindra ho an’ny olona tsy dia maharaka ny fiainam-pirenena sy ny vaovao mifamahofaho amin’izao fotoana izao. Mafampana ny toe-draharaha, sa misy mandrehitra afo mitsitokotoko? Raha henoina tokoa aloha ny fanehoan-kevitry ny « miara-manonja » sy ny « tambatra », dia tena fanina tanteraka izay tsy maharaka. Ny an’iza no marina? Ny an’iza no arahina ? Fa angaha moa tsy fampahalalam-baovao, izany hoe natao hamaliana ireo mety ho fanontaniana hapetraky ny tsirairay ny mivoaka amin’izy ireny?
Izany hoe ihany, fa mahavery hevitra ny maro ihany koa ity toa terana tsy maintsy mirona atsy na aroa ity. Izay tsy volomboasary izany, dia tsy maintsy ho mena? Izay tsy miandany amin’ny fitondrana dia tsy maintsy mpanohitra? Raha vao misalasala izany dia mpamadika?
Satria tokoa, izany ny zava-misy eny anivon’ny fiarahamonina eny. Mifandramatra ny mpianakavy. Mifandrafy ny mpiray karan-doha. Noho ny fironana ara-politika ihany anefa izany… Tsy vao izao io no nisy fa nihamafy indray tato anatin’ny herinandro vitsivitsy izay. Tsy mahagaga loatra satria raikitra indray ny fikopahana afo mba hirehetan’ny krizy.
Milaza ho eny Soamandrakizay ny mpanohitra. Efa tsy tatitra intsony fa hetsi-bahoaka mihitsy no harangarangan’izy ireo. Nialoha izany anefa, tao ambadiky ny radio ihany no nandrenesana ireo mpitarika, fa tsy nisy tazana na teny Analakely na teny Ambohijatovo. Mampirisika fotsiny dia miandry kendry tohina?
May volon-tratra noho izany koa ny fitondrana, izay tsy maintsy mitandro fatratra ny tsy hisian’ny krizy manaraka. Mamaly avy hatrany raha vao mahazo kiana. Miatrana vao maheno ambanambana. Zaran’ny mpanohitra aza, satria sarotin-kitika ka hataony isak’izay mahatsiaro.
Fa eo anelanelan’izany, misy olona marobe tsy te hierika krizy intsony. Mety tsy mpomba izy, fa tsy mpanohitra ihany koa. Aleo tsy hatao hoe vahoaka, satria samy milaza fa miaraka amin’ny vahoaka avokoa ny mpanao politika. Fa ireo olona marobe ireo, tsy mbola mikatom-pery tamin’ny krizy taloha. Mbola norarafan’ny krizy nateraky ny valanaretina ary mbola miady mafy isan’andro. Avelao izy hiaina tsotra…